Norvezy angamba no tena"mahery"firenena amin'ny tany
Ny Fanjakan 'i Norvezy dia ny tanin' fjords, ranomandry sy polar jiroTeraka eto ihany ny Vikings sy ny ich weiss nit, izay rehetra mihitsy: mangatsiaka, ala matevina, henjana Avaratra natiora. Ny anaran ny firenena avy amin'ny teny anglisy teny ð -"fomba Avaratra". Ho an'ny mpizaha tany mahaliana Norvezy tsara tarehy fjords sy cozy renivohitry ny faritra Avaratr'i Eoropa, Oslo, tsara ski resorts sy ny any amin'ny tendrontany Avaratra vahiny, matsiro ary mikolokolo ny fahaiza-mahandro (izay ny salmon - manodidina ny lohany), mahaliana ny tranom-bakoka sy tsara fotodrafitrasa. Fa ny zava-dehibe indrindra, dia afaka mirehareha ny Norvezy - tsy hay lazaina ny rivo-cordiality, ny fanajàna ny maha sy ny faniriana amin-kitsimpo mba hahatonga ny vahiny tia azy mafy fa tsara tarehy Avaratra tany. Norvezy dia tena Fanjakana amin'ny mpanjaka sy ny Mpanjakavavy. Any Norvezy manjaka ny fitondram-panjaka, saingy fahefana ara-politika manana ny Solombavambahoaka.
Nefa tandremo, any Norvezy, mampino miovaova ny toetr'andro
Ny Norwegians ny fitiavana sy ny fiarovana ny fitondram-panjaka. Ny olon-dehibe mponina kokoa noho ny halehiben'ny ny tanora, dia afaka mirehareha ho efa nihazona ny fianakavian'ny Mpanjaka."Rehetra noho ny Norvezy"no teny filamatra misoratra eny amin'ny akanjo ny fitaovam-piadiana 'ny mpanjakan' i Norvezy. Ary eto efa ho taona maro izay manompo ho toy ny teny filamatra ho an'ny Mpanjaka ao Norvezy. Noho ny mafana Gulf renirano, ny toetr'andro any Norvezy dia tena malemy fanahy. Ny ranomasina eny amin'ny morontsiraka Avaratr'i Norvezy, any ambony ny faribolan-tendrontany Avaratra, tsy mandry, na dia ao amin'ny ririnina sy ny fahavaratra na dia any amin'ny faritra Avaratry ny firenena ny mari-pana miakatra ho roa-polo °C. Ao amin'ny faritra amorontsiraka maintsy antonony ny fari-Dranomasina toetrandro (any amin'ny farany Avaratra dia subarctic). Any amin'ny faritra afovoan-tany, indrindra fa any amin'ny faritra be tendrombohitra, fa ny toetr'andro dia continental - ary nafana fahavaratra, ary mangatsiaka ny ririnina. Zavona, masoandro, rivotra mahery, rain afaka manova amin'ny mahagaga matetika. Ny Norwegians aza noforonina ny ohabolana hoe:"tsy toy ny toetr'andro? Andraso iray minitra."Ny mponina dia latsaky ny tapitrisa.
Bebe kokoa tapitrisa Norwegians velona tao Oslo ny renivohitra sy ny tany manodidina azy.
Misy tanàna manana mponina mihoatra ny telo arivo no heverina ho lehibe.
Ao amin'ny firenena Skandinavia (Norvezy sy Islandy) ny avo indrindra ny tahan'ny fahaterahana any Eoropa amin'ireo vahoaka teratany sy tsy vao tonga.
Ny Scandinavians tany am-boalohany nanao asao mba hanatsarana ny kalitaon'ny fiainana ny ankizy, tsy mitombo ny isan'ny teraka.
Rehetra ny Norwegians fitiavana sy mankasitraka ny ranomasina.
Tia ny hiaina tsy misy bebe kokoa noho ny roa-polo amby telo-polo metatra miala ny rano, na ao an-tsipika ny fahitana. Ireo izay miaina ao amin'ny hinterland, mbola buy ny faharoa-trano ny ranomasina. Na dia sambo manana mponina.
Ny toetry ny tany Norvezy dia samihafa.
Ny ala, ny tendrombohitra, renirano, ny farihy, ny ranomasina any madio mangalahala ny toe-javatra. Toe-toetra dia tena malemy fanahy. Mampanofa tsy misy, ny fako koa dia saika tsy misy. Amin'ny ranomasina dia tsy misy intsony ny moka sy ny bibikely hafa. Norvezy dia manana ny lehibe indrindra halehiben'ny fjords eo amin'izao tontolo izao.
Ny fjord dia malalaka, matetika miolakolaka sy lalina fantsona amin'ny rocky shores, handroso avy ny ranomasina afovoan-tany ho an'ny maro kilometatra.
Araka ny lalàna, ny olom-pirenena rehetra ao amin'ny firenena sy ny vahiny no mitondra ny lohateny hoe maimaim-poana ny fidirana ireo harena voajanahary rehetra tsy misy fepetra toy ny any anaty ala na an-dranomasina. Afaka mandeha sy ny milomano na aiza na aiza no tianao. Raha toa ka ny tany dia tsy miankina na mimanda, toy ny fahalalam-pomba izany no tokony hatao ny mangataka ny tompon'ny fahazoan-dalana hitsidika izany. Norvezy dia ny avaratra ny teboka avy amin'ny tanibe ao Eoropa. Antsoina hoe Avaratra Cap, izany dia miorina eo amin'ny sisin'ny tevana Avaratra.
Ao tsara any ianao dia afaka mahita ny sisin'ny Arctic vongan-dranomandry.
Hatramin'ny roa-polo taona, Norvezy tampon'ny ny lisitra ny firenena amin'ny fampandrosoana ny mahaolombelona. Norvezy dia azo antoka firenena. Eto hankatò ny lalàna, dia tsy misy ny heloka bevava, fa halatra no heverina ho zavatra antoka ho an'ny ankamaroan'ny Norwegians.
Lehibe ihany no mpaninjara manana ny detectors ny halatra entana output, na ny fakantsary fanaraha-maso.
Raha tsy izany dia saika na aiza na aiza mba ho hita.
Ny eo ho eo ny karama ho an'ny maro Norwegians azo hatramin'ny alina euros isam-bolana.
Ho hita eo an-dalambe mangataka saika tsy ho vita.
Maningana ireo ihany no tanàna lehibe, ary matetika dia ny olona avy amin'ny mpifindra monina.
Ary ny famonoana olona iray fara-fahakeliny dia resahina ao - pirenena FAHITALAVITRA sy ny onjam-peo farafahakeliny herinandro iray.
Any Norvezy ny fanabeazana sy ny kolontsaina ao amin'ny eo anoloana. Eto ny fotoana voalohany eo amin'izao tontolo izao, ao ny lavitra sivy ambin'ny folo, dia tsy maintsy atao fanabeazana fototra. Ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany ny fampianarana tsy malagasy (miaraka amin'ny kilasy voalohany), fa, ankoatra ny nentim-paharazana sekoly foto-kevitra - ny tontolo iainana sy ny zava-kanto. ny olona any Norvezy miresaka, manoratra sy mamaky teny anglisy. Ny ankizy dia mianatra ny teny avy - taona, na haingana. Misy ny zaza raha tsy misy ny olana mifandray aminao amin'ny teny anglisy.
Amin'ny ankapobeny afa-tsy ireo efa misotro ronono.
Ny lalana, ny fampianarana tao Norvezy mandany telo heny noho ny fahasalamana, sy ny fahasalamana ara - efatra heny noho ny fiarovana. Raha ny zavatra air force niambina tsy ny sisin-tanin ny firenena, nefa koa ny airspace ny Islandy, izay ny tafika no tsy amin'ny rehetra. Ny fiainana manerana ny firenena no tondra-tena tamim-pahatoniana sy ny mitovy ny anjaran'ny tsirairay. Ny asa ny Norwegians manomboka ny ao amin'ny maraina, ary ny -m no efa vita. Ao amin'ny output ihany hanokatra toeram-pisakafoanana na toeram-pivarotana lehibe. Ny fanajana ho an'ny dia tantanan'ny orinasa tsy miankina dia hajaina na aiza na aiza. Andro ny ankamaroan'ny trano fonenana dia tsy mihidy amin'ny rehetra, afa-tsy ho an'ny trano fonenana ao amin'ny tanàna lehibe, ary izany dia tanteraka soa aman-tsara. Mandehana-in nasaina nanaiky ny fanasana. Ny tena fomba fitaterana any Norvezy - bisikileta. Norwegians kokoa ity karazana fitaterana na inona na inona. Any Norvezy dia tsy fanao ny manary foana ny siny hoditra rehetra, am-bifotsy sy ny tavoahangy zavatra famokarana nanofa - amin'ny toeram-pivarotana misy milina manokana izay manisa ny tavoahangy sy hanome anao ny maso.
Ny maso dia aseho amin'ny tapakila ary dia namoaka ny sasany vola.
Saika ny mponina mifandray amin'ny Aterineto haingam-pisosa. Noho ny toetr'andro sy ny lehibe lavitra, ny Norwegians be dia be mipetraka ao amin'ny tambajotra. Efatra avy dimy Norwegians manana ny sambo na, fara fahakeliny, sambo. Ny Norwegians tia ny ranomasina. Angamba, ny ara-panahy no lova ny razambeny-ny Vikings. Ny fandripahana ala any Norvezy dia ny Norwegians aleon-buy hazo avy any amin'ny firenena izay tsy miraharaha ny natiora. Ohatra, Norvezy.
Eo amin'ny indray ny arabe matetika misy latabatra miaraka amin'ny legioma sy ny voankazo, ary manaraka ny price tag sy siny ho an'ny ny vola.
Maro no efa nataony ka maro ny faktiora.
Tsy misy mijery. Mba hamitaka, misy tsotra izao tsy nanaiky. Tsy araka ny inoan'ny, fa tsy ny rehetra ny Norvezy dia ny hatsiaka.
Ao Atsimo ao amin'ny ririnina, mety tsy ho oram-panala, fa ny mari-pana mety tsy alatsany ambanin'ny aotra.
Multi-rihana sy ny trano fonenana itambaram-be kely, saika tsy misy. Ny ankamaroan'ny olona miaina amin'ny tsy miankina trano. Ny trano dia tsotra, fa aina. Izy ireo dia matetika miloko mena na fotsy, matetika amin'ny bozaka ny bibidia ahitra eo amin'ny tampon-trano. Vokatra any Norvezy ny kalitao ambony indrindra. Indrindra fa ny ronono. Teny an-dalana, eto dia ny lafo indrindra burgers ao Eoropa. Trondro any Norvezy dia tsy mampino napetraka, noho izany ny firenena no tena mandroso ny ranomasina sy ny farihy fanjonoana. Fanjonoana ny fahazoan-dalana dia tsy ilaina, ka nahatonga ny maro Eoropeana tonga tany Norvezy amin'ny fiarabe ny ho velona ao amin'ny cheapest trano, na tranolay, fanjonoana nandritra ny roa herinandro, tsy misy fiatoana, ny fanomezana ny tenany amin'ny trondro ny volana ho avy, ka mandehana indray. Amin'ny firenena arabe, matetika akaikin'ny toeram-pambolena, matetika dia afaka mahita ny latabatra miaraka amin'ny legioma na voankazo amin'ny vidin-javatra. Izany dia hijoro kirany, fonosana ho an'ny fividianana, ary ny siny ho an'ny ny vola. Io no karazam-tena ny asa fanompoana. Ny zava-drehetra dia mifampatoky. Ny nahandro ao an-toerana dia tsotra sy unpretentious.
Ny Norwegians nahomby tamin'ny fomba fanamboarana ny fijinjana ny trondro: maina, sira, nifoka, sns.
Raha ny fitadiavana sushi trano fisakafoanana na café fanompoana sushi saika tsy ho vita.
Izy ireo ihany no tao Oslo, Bergen sy Stavanger.
Amin'ny tanàna hafa iray ihany no misy toy izany ny andrim-panjakana. Fanahy tao Norvezy tsy mividy fotsiny. Dia amidy ihany ao amin'ny toeram-pivarotana manokana (ny toaka ampihimamba), tompony ny fanjakana. Izy ireo dia miasa mafy ny alatsinainy hatramin'ny zoma, tao an-drenivohitra dia misy ny asabotsy misokatra ny toeram-pivarotana mandra-sivy ambin'ny folo: max. Ny toaka dia tena lafo vidy. Fandaharam-potoana toeram-pivarotana any amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena fa miovaova be.
దగ్గిర మొబైల్ ఫోన్లు. డేటింగ్ కోసం పెద్దలు. లేకుండా నమోదు. రియల్ ఫోటోలు
lahatsary fampidirana ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny tovovavy taona maimaim-poana te-hihaona amin'ny zazavavy ny lahatsary amin'ny chat online fampitana ny lahatsary amin'ny chat roulette maimaim-poana video Mampiaraka toerana maimaim-poana amin'ny chat roulette zazavavy an-tserasera tsy misy fisoratana anarana Chatroulette fanompoana Mampiaraka ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy maimaim-poana amin'ny chat roulette tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana